သင်၏ Chatbot အတွက် Landbot မှစကားပြောဆိုမှုပုံစံအတွက်လမ်းညွှန် Martech Zone
Chatbots များသည်ပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားပြီးပိုမိုလွန်စွာရှုပ်ထွေးလာပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကထက်စာရင် site visitors ည့်သည်များအတွက်ပိုမိုချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။ စကားပြောဒီဇိုင်း အောင်မြင်သော chatbot ဖြန့်ကျက်မှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူသူအထောက်အပံ့နှင့်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)၊ onboarding automation၊ ထုတ်ကုန်ထောက်ခံချက်များ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စုဆောင်းမှု၊ စစ်တမ်းများ၊
၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များသည်၎င်းတို့လိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ထပ်မံအကူအညီလိုအပ်ပါကသင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်သည့်နေရာတွင်ကြီးထွားလာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာအတွက်စိန်ခေါ်မှုမှာတကယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအတွက်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သောစကားဝိုင်းအရေအတွက်သည်များသောအားဖြင့်သေးငယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့ထင်သည်အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုရွေးချယ်ရန်နှင့်ကျန်များကိုလျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်းသောပုံစံများကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ပုံစံတင်သွင်းသည့်နည်းစနစ်များသည်ကြီးမားသောပျက်စီးမှုများရှိသည်။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်။ ခိုင်လုံသောတောင်းဆိုမှုအားလုံးကိုအချိန်မီပြန်လည်မတုံ့ပြန်ပါကသင်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးသည်။ အတော်လေးရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ဒီဟာငါ့ site နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြanနာပါ။ တလကို thousands ည့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူငါမေးခွန်းတိုင်းကိုမဖြေနိုင်ဘူး၊ ငါ့ဝင်ငွေကအဲဒါကိုမထောက်ပံ့ဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်လာနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများကိုမေ့နေကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။
ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည် chatbots များကိုထည့်သွင်းနေကြသည်။ Chatbots တွင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။
အကယ်၍ သင်၏ chatbot သည်လူသားဖြစ်သည်ဟုအတုပြုလုပ်လျှင်သင်၏ visit ည့်သည်ကထိုအရာကိုတွက်ချက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်တို့၏ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင် bot ၏အကူအညီကိုရယူလိုပါကသင်၏ visit ည့်သည်ကသူတို့ bot ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါ။
chatbot ပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည်အသုံးပြုရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သူတို့၏ or ည့်သည်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအတွေ့အကြုံသည်လှပနေသော်လည်းအသုံး ၀ င်သော bot တစ်ခုကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိနိုင်ခြင်းသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသိတယ် ... ငါဟာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲတဲ့နည်းပညာကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီစနစ်တွေထဲကတချို့ကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။
စကားဝိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အပင်များကိုသင့် bot နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများတိုးတက်စေရန်ဂရုတစိုက်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ bot ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောမေးခွန်းအနည်းငယ်ဖြင့်ပါးရိုက်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ထို့နောက်ပုံစံကိုသင်သုံးနိုင်သည်။
Chatbots သည်သင်၏ visit ည့်သည်၏အရေးတကြီးသဘောထားနှင့်သဘောသဘာဝကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်အတွက်သာလွန်မြင့်မားသောသဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲ (NLP) ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကရလဒ်များသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီး visitors ည့်သည်များကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မည်။
Chatbots တွင်ကန့်သတ်ချက်များရှိပြီးလိုအပ်ပါကသင်၏ ၀ န်ထမ်းရှိလူများနှင့်စကားပြောဆိုမှုကိုချောမွေ့စွာလက်ဆင့်ကမ်းသင့်သည်။
Chatbots သည်သင်၏အရောင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များကို CRM သို့အသိပေးချက်များနှင့်လက်မှတ်ထိုးစနစ်များမှပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းဖြင့်ကြွယ်ဝသောအချက်အလက်များကိုပေးသင့်သည်။
တနည်းအားဖြင့် chatbots သည်သင့်အားအတွင်းပိုင်းတွင်ချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ပြင်ပမှထူးကဲသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိရန်လွယ်ကူသင့်သည်။ လျော့နည်းဘာမှတိုတောင်းလိမ့်မည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာက chatbot ကိုထိရောက်တဲ့အရာကလူနှစ် ဦး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုထိရောက်စေတဲ့တူညီတဲ့အခြေခံတွေဖြစ်တယ်။
Yoru chatbot ၏ visitors ည့်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သောအနုပညာကိုလူသိများသည် စကားပြောဆိုဒီဇိုင်း.
ဤ Landbot ကနေ infographicစကားပြောဆိုမှုပုံစံကိုအာရုံစိုက်သော chatbot ပလက်ဖောင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစကားပြော chatbot မဟာဗျူဟာ၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
စကားပြောဒီဇိုင်း copywriting၊ အသံနှင့်အသံဒီဇိုင်း၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ (UX)၊ ရွေ့လျားမှုပုံစံ၊ အပြန်အလှန်ဒီဇိုင်းနှင့်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်စကားစမြည်ပြောဆိုမှုပုံစံသုံးခုကိုဖြတ်လျှောက်သွားသည်။
သမဝါယမနိယာမ - chatbot နှင့် or ည့်သည်တို့အကြားအခြေခံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်များနှင့်စကားပြောဆိုမှုဖြတ်လမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
အလှည့် - chatbot နှင့် or ည့်သည်တို့အကြားအချိန်မီအလှည့်ကျဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်မရေရာဒွိဟများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ထိရောက်သောစကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
context - စကားပြောဆိုမှုများသည် involved ည့်သည်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊
သင်၏ chatbot ကိုစီစဉ်ရန်၊
အခန်းကဏ္ and နှင့် chatbot အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ပါ
သင်၏ chatbot ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုဖန်တီးပါ
သင်၏ chatbot script ကိုရေးပါ
bot တစ် ဦး နှင့် or ည့်သည်အကြားထိရောက်သောစကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်ရန်ပြီးမြောက်ရန်ရှိသည် အသုံးပြုသူ interface ကို element တွေကို လိုအပ်ချက်များ - နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း၊ မေးခွန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အမိန့်များ၊ အတည်ပြုချက်များ၊ တောင်းပန်မှုများ၊ ဟောပြောချက်အမှတ်အသားများ၊ အမှားများ၊
Landbot တွင်သင်၏ chatbot ကိုသူတို့၏ site ပေါ်တွင်မည်သို့စီစဉ်ရန်နှင့်မည်သို့တပ်ဆင်ရန်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။
Landbot စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားစကားစမြည်ဝိုင်းအတွေ့အကြုံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အခွင့်အာဏာပေးသည် ကြွယ်ဝသော UI ကို element တွေကို, အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်နှင့် Real-time ပေါင်းစည်းမှု.
ဝဘ်ဆိုက် chatbots များမှာ Landbot ရဲ့ အားသာချက်များရှိသော်လည်းအသုံးပြုသူများသည် WhatsApp နှင့် Facebook Messenger စက်များကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
ယနေ့ Landbot ကြိုးစားပါ
ထုတ်ဖော်: ငါတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ Landbot.
Tags: Affiliatebotchatbotchatbot ဒီဇိုင်းchatbot စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းchatbot ui ပါchatbot အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်စကားစပ်စကားလက်ဆုံစကားပြောဆိုဒီဇိုင်းသမဝါယမနိယာမfacebook messenger ကိုမြေပဲ